Vaovao - Fihaonambe momba ny varotra telovolana faha-2020 · Haingam-pandeha
Fihaonambe momba ny varotra telovolana faharoa 2020 · Haingam-pandeha
Tamin'ny 8 maraina tamin'ny 5 Jolay 2020, ny fivorian'ny fivarotana telovolana faharoa an'i Kaihua Mould dia notontosaina ara-potoana tao amin'ny efitrano fihaonambe Tongji Huangyan Rural Revitalisation College.
Mpiasa marketing 65 sy mpitarika zokiolona 65 avy amin'ny foibe Huangyan sy Sanmen Factory no nandray anjara tamin'ity kaonferansa marketing ity. Nizara roa ny kaonferansa:
MeetingNy fivorian'ny varotra telovolana faharoa amin'ny 2020
②Ny hetsika fanatanjahantena «Fast and Passion» faha-4
Fotoana mahafinaritra amin'ny fivorian'ny fivarotana
Tany am-piandohan'ny fivoriana dia nanao kabary ny filoha Liang Zhenghua.
Voalohany indrindra, nizara ny data ny filoha Liang Zhenghua "Ny tahan'ny fahavitan'ny drafi-pandrindrana tamin'ny telovolana faharoa dia 101%, ary nitombo 35% isan-taona ny fampisehoana." Ny filoha Liang Zhenghua dia nanamafy tanteraka ny zava-bitan'ny mpivarotra nanatrika ny telovolana lasa teo ary naneho ny fankasitrahany ny rehetra. Avy eo dia nanao fanadihadiana lalina momba ny tontolon'ny tsena ankehitriny izy, nilaza tamin'ny rehetra ny momba ny fifantohana sy ny làlan'ny asa amin'ny telovolana manaraka, ary nametraka teny manan-danja efatra: "tsingerina fohy", "traikefa ho an'ny mpanjifa", "vokatra vaovao", "mpanjifa" mpiara-miasa ”.
Manaraka izany, tonga teo amin'ny sehatra ny mpiasa marketing tsirairay mba hitatitra ny famintinana ny asa tamin'ny telovolana teo aloha sy ny drafitry ny asa amin'ny telovolana manaraka.
Gina, talen'ny varotra ao amin'ny departemantan'ny varotra ivelany dia nizara tamin'ny olon-drehetra: "Noho ny fiantraikan'ny valanaretina tany ivelany dia nahemotra na nofoanana mihitsy aza ny fampirantiana sasany, ary mety hahemotra amin'ny 2021 koa ny làlan'ny mpanjifa mitsidika. manovaova, manitsy ny satan'izy ireo manokana, ary manangona, na inona na inona fomba ifandraisan'ny mpanjifa amin'ny lafiny rehetra! ”
Nandray ny dingana tsirairay ireo mpitarika zokiolona ao amin'ny orinasa mba hizara ny fahatsapan'izy ireo tamin'ny telovolana faharoa sy ny làlan'ny fanatsarana amin'ny telovolana manaraka.
Liu Qingjun, filoha lefitra mpanatanteraky ny foiben'i Huangyan
Liang Zhengwei, filoha lefitra mpanatanteraky ny Sanmen Factory
Mpitantana ny departemanta
Haingana & Tezitra
“Di——” Miaraka amin'ny siotsiakan'ny mpanazatra dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy ity asa fitoriana ity.
Ity hetsika fanentanana ity dia misy ampahany 4 indrindra, "Icebreaker", "Challenge Yourself: High-altitude Tightrope Walk", "Team 150, Power Circle" ary "Happy BBQ".
Andao isika hiara-hahatsapa ny atmosfera mafana amin'ilay hetsika!
“Vaky ny gilasy”
Ny zava-bita dia avy amin'ny ekipa, ary ny ekipa dia mahavita ny tenany.
Ny lalao mamaky ranomandry dia mamaky amin'ny fomba mahomby ny sakantsakana misy eo amin'ny olona, ​​mamorona tontolon'ny serasera tsara ary mandrisika ny hafanam-po sy ny fanahin'ny mpiady.
“Mandehandeha amin'ny tadin'ny havoana avo”
Hatrany am-piandohana feno fanantenana, ny diany mankany afovoan'ny meteor, somary misalasala ny handroso, eo ambanin'ny kiakiaka sy ny fankaherezana avy amin'ireo namako, nandritra ny dingana sarotra indrindra, nahita ny fahitana teny lavitra, naka dian-tongotra mafy, ary manakaiky ny farany tsikelikely. Mahatratra tanjona ary tohero ny tenanao.
“Ekipa 150, faribolana hery”
Ny fizarazaran'ny asa, ny fifampaherezana, ny fifampitokisana, miaina ny fetra azo atao sy ny tsy azo atao.
Rehefa tonga ny alina dia mafana hatrany ny atmosfera
"BBQ Sambatra" no nanambara ny fanokafana
Kaihua Hummingbirds lavitra ny korontana ao an-tanàna
Ankafizo tanteraka ny rivo-piainana mahafinaritra an'ny fihaonan'ny vondrona voajanahary
Miaraha miasa sy miatrika fanamby amin'ny tenanao
Ampitomboy ny toe-tsain'ny ekipa sy ny fifankahazoana ary ny fifampitokisana eo amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa
Miaraka, ny ekipa dia ny ekipa